Golaha Xukuumada Puntland oo Ansixiyay Xeerka Tayaynta Caasimada. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Golaha Xukuumada Puntland oo Ansixiyay Xeerka Tayaynta Caasimada.
Golaha Xukuumada Puntland oo Ansixiyay Xeerka Tayaynta Caasimada.
September 5, 2019 - By: Mohamud Nadif
Shirka Golaha wasiirada Puntland oo maanta ka Qabsoomay Garoowe ayaa looga hadlay xaaladaha Amni, Shirka Maalgashiga Puntland oo 15ka bishaan Garoowe ka furmaya, Dhismaha Golaha Deegaanka Baran, Sidoo kale isla goluhu maanta wuxuu ansixiyay xeerka tayaynta caasimada.
Xeerka ayaa ah mid diirada saari doona arimaha amniga ee caasimada sida hubka aan sharciyaysnayn, Ilaalida Mauuliyiinta, Bacaha Madaw iyo Xarumaha Ganacsi, waxaan soo gudbisay wasaarada Amniga, Golaha Xukuumada Puntland ayaana sharcigaan ansixiyay.
Golaha Wasiirada Puntland waxay bogaadiyeen doorashadii ka dhacday Degmada Barn oo dhawaan lagu doortay Gudoomiyaha iyo Gudoomiye ku xigeenka Degmada Baran. Sidoo kale Goluhu waxay tilmaameen in Xaalada Amni ee Puntland ay hagaagsan tahay.